Izingozi Ze-Oxygen Hyperbaric Therapy HBOT
Ikhaya/Izingozi Ze-Oxygen Hyperbaric Therapy HBOT
Izingozi Ze-Oxygen Hyperbaric Therapy HBOTteknamfg2018-01-21T07:06:03+00:00
I-Hyperbaric Therapy Oxygen HBOT Izingozi
Kuyini I-Hyperbaric Therapy Oxygen? I-HBOT yindlela yokwelashwa enqunywe yi-FDA ne-AMA lapho isiguli siphefumulela i-100% ebangeni lobukwelapha oksijeni ngenkathi ingcindezi yenkampani yokwelashwa yanda kuze kube sezingeni eliphakeme kunezingcindezi ezingeni lolwandle. Lokhu kusiza ukusheshisa nokuthuthukisa ikhono lemvelo lomzimba lokuphulukisa. I-HBOT iyindlela ephephile, engenabuhlungu, engekho engavamile futhi yokwelapha. Ngokuvamile, akukho izinkinga ezinkulu ezihlobene noHypergenic Oxygen Therapy, kodwa ezinye izinkinga noma imiphumela emibi zingase zihlobene nesimo sokuqala esiphathwe.
Indlebe Barotrauma - Ukulukhuni ngokuhlanza izindlebe kubangela ukuthi "kuvele" futhi kungabangela ubuhlungu obukhulu ukuya ekunciphiseni. I-middle-barotrauma indlebe iyisici esivamile kakhulu se-HBOT therapy. Isigulane sivimbela i-barotrauma ngokusula izindlebe (ukulinganisa) ngesikhathi sokungena kwamakamelo kanye nokunyuka. Izindlela eziningi zokuhamba kwamandla emali okusetshenziswa kwe-inflation zingasetshenziswa, noma, amashubhu we-tympanotomy angasetshenziselwa labo abangakwazi ukuzitholela ngokuzenzakalela.
I-Sinus Pain, Izifo Eziphezulu Zokuphefumula Ne-Sinusitis Engapheli - I-Sinus icindezela ibonakala kancane kakhulu kune-barotrauma endlebe. Ama-antihistamine, ama-decongestants, kanye / noma ukusifiphaza komzimba kungasetshenziswa ngaphambi kokungena ekamelweni. Ngokunciphisa nokunciphisa ngokweqile, ngokuvamile azikho izinkinga.
I-Myopia ne-Cataract - I-Myopia iyinkimbinkimbi eguquguqukayo yokuvezwa okuphindaphindiwe ku-HBOT. Uma i-myopia eqhubekayo yenzeka phakathi nochungechunge lwezokwelapha ze-HBOT, ngemva kokuqedwa kwezokwelapha, izinguquko ezibonakalayo ziyashintsha ngokuphelele. Ukusheshisa ukukhula emalonyeni okukhona kuyinkimbinkimbi yokuchayeka okungapheli isikhathi eside ekucindezelekeni kwe-2 ATA. Imibiko eshicilelwe kanye nokuhlangenwe nakho okubanzi komtholampilo kubonisa ukuthi izidakamizwa ezintsha azihambisani nochungechunge lwe-30 kuya kwe-50 zokwelapha ezisetshenziswa kakhulu e-USA.
I-pulmonary - Ukubonakaliswa kwamapulmonary kanye neurological of oksijeni enobuthi ngokuvamile kubhekiswa njengokukhathazeka okukhulu nge-HBOT. Imingcele yokubekezelelana kwe-oksijini evimbela lezi zibonakaliso zichazwe kahle ngokuvezwa okuqhubekayo kubantu abavamile. Izimpawu zamapulmonary azikhiqizwa yi-oxygen ku-2.0 noma i-2.4 ATA ye-2 noma i-1.5 amahora ngokulandelana. Isimo se-oxygen convulsions uma usebenzisa ukuchayeka okufanayo mayelana ne-1 ngeziguli ze-10,000 zokwelashwa. Ngisho nalapho kwenzeka ukuqhuma kwe-oksijeni, ayikho imiphumela ehlalayo uma kwenzeka ukugwema ukulimala. Iziguli ezinokuvinjelwa kwamanzi zinengozi enkulu ye-barotrauma ye-pulmonary ngesikhathi sokucindezeleka. I-barotrauma yepulmonary ngesikhathi sokunciphisa ingavamile.
I-Pneumothorax engaziwa - I-contraindication yodwa kuphela ye-HBOT ayi-pneumothorax engaphathwa. Ukususwa kokuhlinzwa kwe-pneumothorax ngaphambi kokunakekelwa kwe-HBOT, uma kungenzeka, kususa isithiyo ekwelapheni. I-X-ray ye-Chest ingadingeka ukuze ilawule i-pneumothorax, uma umlando wezokwelapha uhlanganisa: 1) Umlando we-pneumothorax ngokuzenzekelayo; I-2) Umlando wokuhlinzwa kwe-thoracic; noma i-3) Umlando wokulimala kwesifuba. I-Pneumothorax iyinkimbinkimbi, engabangelwa ukuphefumula okubambe ngesikhathi sokucindezeleka.
Ukuqubuka kwe-oksijeni - Ukukhubazeka kokukhishwa kubikwa ku-0.01% yezokwelapha ze-28,700 futhi akukabikwa ngaphansi kwe-2.0 ATA ngehora noma ngaphansi. Inkomba; U-Davis (1989) ubuyekeze iziguli ze-1505 eziphathwa phakathi kwe-1979 no-1987 futhi zathola amaseshini we-52,758 amahora amabili. U-Oxygen Ukudumala kwenzeka kuphela kwiziguli ze-5, (0.009%) bonke abaye baphola ngokugcwele.
Claustrophobia - I-Claustrophobia, ebonakala sengathi ikhona mayelana ne-2% yabantu abaningi, ingabangela ukukhathazeka okungenani kokuvalelwa. Ukudambisa okunomusa kungabekwa kulabo abagulayo abanenkinga.
Amazinyo - Wonke umsebenzi wamazinyo, izimpande zamanzi, kanye nokugcwaliswa kumele kugcwaliswe. I-barotrauma yamazinyo kungenzeka ukuthi kungenzeka. Iziguli akufanele zithole ukwelashwa uma zinama-caps wamazinyo okwesikhashana noma imigodi engapheli.
I-Bookbook ye-Hyperbaric Medicine, uKK Jain, MD, Vol. 1, 2, 3
Ukusebenza kwemithi yama-hyperbaric, u-Eric Kindwall, MD
Ukunakekelwa kwesiguli esithola ukwelashwa kwe-oksijeni, i-Manual of Standards for Care. I-1988 i-Norkool, D
I-Hyperbaric Therapy Oxygen: Umbiko Wekomidi 1999. UHMS
Ukufaneleka kuya kuDive. I-DAN (I-Divers Alert Network)
I-UHMS (i-Undersea Hyperbaric Medicine Society)
I-IBUM (I-International Board ye-Undersea Medicine)
I-NBDHMT (I-National Board of Diving ne-Hyperbaric Medical Technology)